Pannzagar: April 2009
Thoughts, Opinions, Feelings, Moments of Happiness and Sadness.
"An ordinary man with an extraordinary dream."
Classic Literature Resurrection
Cartoon and Graphic (5)
Kahil Gibran (4)
Life isachallenge - meet it
Life isagift - accept it
Life isasorrow - over come it
Life isamystery - unfold it - unsolve it
Life isaopportunity - take it
Life isapromise - complete it
Life isastruggle - fight it
Life isagoal - achieve it
Life is love - love it
Life can be adventures - have fun
Life isaduty - perform it
Life isagame - out smart it
Life isabeauty - praise it
Life is life - live it - make of something good of it
ဒီစာကလေးက Jessica Workman ဆိုတဲ့ ၁၅ အရွယ်ချာတိတ်လေးတစ်ယောက် ရေးထားတဲ့ ကဗျာပါတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီစာစုလေးတွေက ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖတ်ဖူးနေတဲ့ စာအတိုလေးတွေပါ။ သူကပြန်ပြီး စုစည်းထားတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လျှာရှည်ပြီး ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူးနော်။ ၅ ကြောင်းမြောက်က unsolve it ဆိုတာကတော့ Grammar အရ မှားနေတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မူရင်းအတိုင်းပဲ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁၁ ကြောင်းမြောက်က Life can be adventures - have fun ဆိုတာမှာလည်း ကျနော် ငယ်ငယ်ကတည်းက မှတ်မိတာကတော့ Life is an adventure - dare it ပါ။ ဒါက ပိုပြီး သင့်လျှော်မယ်လို့ ထင်တာပဲနော်။
အခုတော့ ရေကသိပ်အေးလွန်းတယ်.. အရမ်းကိုအေးလွန်းတယ်လေ..။
အခုတော့ အရမ်းမြင့်လွန်းနေတယ်.. သိပ်ကိုမြင့်နေတယ်လေ..။
ဒါပေမယ့် မွေးဖွားလာတဲ့အတွက် ရှင်သန်ရဦးမယ်။
ဒါပေမယ့် ငါကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဖူး
ဒီကဗျာကတော့ အမေရိကန်နီဂရိုးကဗျာဆရာ စာရေးဆရာ Langston Hughes (1902 - 1967)ရဲ့ လက်ရာပါ။ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ထားတာ သိပ်တော့ စိတ်တိုင်းမကျပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အားနာလွန်းလို့ ဒီနေ့တော့ ပို့စ်တစ်ခု ရအောင်တင်မယ်ဆိုပြီး ချက်ချင်းရေးခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ပုံကတော့ အရင် ဘ၀ထဲမှာ ပို့စ်ကပုံလေးပဲ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ လှတယ်ဟုတ်။ :P
Poem | comments (5)
ဒီကနေ့ Adventures of Tom Sawyer စာအုပ်လေး တင်ပေးပါမယ်ဆိုမှ ဘဏ်ကဖုံးဆက်ခေါ်လို့ ညနေအလုပ်ဆင်းတော့ သွားရသေးတယ်။ (အကြွေးလှမ်းတောင်းတယ်မထင်နဲ့နော်.. iBanking Service လျှောက်ထားတာ လျှောက်လွှာမှာ တစ်ခုခု လိုနေသေးလို့ပါတဲ့။) အလုပ်ကထွက်တော့ ၆ နာရီ၊ ရေချိုးပြီးတော့ ၆း၃၀၊ အပြင်တောင် မထွက်ရသေးဘူး မိုးတွေရွာလာလို့ မိုးတိတ်အောင်စောင့်လိုက်တာ ၇ နာရီထိုးမှပဲ ဘဏ်သွားဖို့ ကားဂိတ်ရောက်တော့တယ်။ တော်သေးတာပေါ့ ဒီဘဏ်ခွဲရုံးလေးက ည ၈ နာရီအထိဖွင့်တယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေလည်းဖွင့်တယ်။ ပုံမှန် ဘဏ်ဖွင့်ချိန်နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ရုံးခွဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အလုပ်လစ်ပြီးမှ သွားရမယ့်ကိန်းပဲ။
အင်း.. ထားပါတော့ ပြောချင်တာက အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့စာအုပ်တင်တာ နောက်ကျသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဆင်ခြေကန်ကြည့်တာပါ။ :P စာအုပ်အကြောင်းဆက်တာပေါ့နော်..။
အမေရိကန်စာရေးဆရာကြီး Mark Twain ကိုတော့ အတော်များများသိကြမှာပါ။ သူ့ရဲ့နာမည် အရင်းကိုတော့ သိတဲ့သူနည်းလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ ဟိ ဟိ။ အထင်မကြီးပါနဲ့။ ဟိုတစ်လောကမှ အင်တာနက်မှာ အမှတ်မထင်ဖတ်လိုက်မိလို့ပါ။ သူ့နာမည်ရင်းက Samuel Langhorne Clemens (November 30, 1835 – April 21, 1910)ပါတဲ့။
ကလောင်နာမည် Mark Twain ဖြစ်လာပုံကတော့ ဒီလိုပါတဲ့။ သူဟာ မစ္စပီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်မှာ Steamboat pilot အင်း.. ရေနွေးငွေ့သင်္ဘောကပ္ပတိန်ပေါ့ဗျာ အဲဒါ လုပ်ဖူးပါတယ်။ လစာကလည်း အတော်ကောင်းဆိုပဲ။ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၂၅၀ ရပါသတဲ့။ မရယ်ကြပါနဲ့ဦး။ အဲဒီတုံးက တစ်လ ၂၅၀ ဆိုတာ အခုခေတ်အနေနဲ့ဆို တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၁၅၅,၀၀၀ နှုန်းနဲ့ အကြမ်းဖျင်းညီမျှပါသတဲ့။ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၁၃၀၀၀ နီးပါးနဲ့ညီမျှပါတယ်။ လျှာရှည်လက်စနဲ့ ဆက်ရှည်လိုက်ရရင် သူက သူ့ညီကိုလဲ အဲဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ညီလည်း pilot မဖြစ်ခင် သင်ယူနေတုံးမှာပဲ သူလိုက်နေတဲ့ Steamboat ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး သေရှာပါတယ်။ အဲဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်မှာကို Mark Twain ဟာ တစ်လလောက်ကတည်းက ကြိုပြီးအာရုံထဲမှာ သိနေပါတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူလည်း စိတ်နယ်လွန်ပညာ Parapsychology ကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါသေးသတဲ့။
အင်း.. ပြောနေတာ ဘေးချော်သွားပြီ။ အဲဒီ မစ္စပီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက် Steamboat မောင်းရာမှာ သင်္ဘောအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ သွားလို့ရနိုင်မယ့် ရေအနက်ကို သတိထားပြီးကြည့်ရပါတယ်တဲ့။ ရေစူးတိမ်တဲ့နေရာဆိုရင် သင်္ဘောသောင်တင်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ သူတို့မောင်းတဲ့ Steamboat တွေအတွက် စိတ်ချရတဲ့ ရေစူး (ရေအနက်)က ရေကြောင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာအရ ၂ ဖာသွန် (2 fathoms) လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ 1 fathom က ၂ ကိုက် (2 Yards) သို့မဟုတ် (1.8 meter) နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ရေအနက်ကို ကြည့်တဲ့လူက သင်္ဘောဘေးက sounding line ကိုကြည့်ပြီး ရေအနက် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ အော်ပြောရပါတယ်။ ရေအနက်က ၂ ဖာသွန်ရှိတယ်ဆိုရင် bye the mark twain လို့အော်ပါတယ်။ by the mark ကတော့ရှင်းပါတယ်။ twain ဆိုတာက အဲဒီတုံးက သင်္ဘောသားတွေသုံးတဲ့ စကားပါ။ two လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်တဲ့။ အပြည့်အစုံဆိုရင်တော့ "according to the mark [on the line], [the depth is] two [fathoms]" လို့ ပြောတာပါတဲ့။ အဲဒါကို အတိုကောက်ပြောကြတော့ Mark Twain လို့ပဲ အော်ကြပါတယ်တဲ့။ အဲဒီစကားလေးကို ယူပြီး သူ့ရဲ့ကလောင်နာမည်ပေးထားတာပါတဲ့။ Wiki မှာဖတ်ရတာပါ။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သွားဖတ်တော့နော်။ :P
စာအုပ်အကြောင်းမရောက်နိုင်သေးဘူး။ ဒီစာအုပ်ကတော့ သူ့ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့လက်ရာတစ်ခုပါ။ အဓိကဇာတ်ကောင် Tom Sawyer ဆိုတာ အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့ကောင်လေးပါတဲ့။ တစ်ယောက်ထည်းရဲ့ character တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သူတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ကောင်လေးသုံးယောက်ရဲ့ character တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးရေးထားတာပါလို့ Mark Twain ကိုယ်တိုင်က ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှောင်းလူတွေကတော့ ဒါဟာ Mark Twain ကိုယ်တိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ဘ၀တွေကို အမှတ်တရ ပြန်ရေးထားတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ရံကောင်လေး Huckleberry Finn ကလည်း ခေသူမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေအကြောင်းကိုလည်း Adventures of Huckleberry Finn ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ စာတစ်အုပ် ရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီစာအုပ်ကို မဖတ်ဖူးသေးဘူး။
Tom Sawyer ကိုတော့ ကျွန်တော် USIS မှာ ဖတ်ခဲ့ရတာပါ။ စဖတ်ကတည်းက ဆွဲဆောင်အားကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးက ရွှင်ရွှင်မြူးမြူး သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ပါ။ ကလေးချင်းအတူတူ Tom တစ်ယောက် လူလည်ကျပြီး ခြံစည်းရိုးကို ဆေးညာသုတ်ခိုင်းပုံကလေးကလည်း ပြုံးစရာပါ။ ကလေးတစ်သိုက်ရဲ့ စွန့်စားခန်းလေးတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဗရုတ်ကျခန်းတွေလည်းပါပါတယ်။ စူးစမ်းစပ်စုတက်တဲ့ သဘာဝကလေးတွေကိုလည်း လှလှပပ ရေးသွားတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကလေးတွေနဲ့ ပါသွားသလားလို့တောင် ထင်မိပါတယ်။ အဲလောက်ညွှန်းရရင် တော်ရောပေါ့နော်။ :P
မြန်မာပြန် ရှိမရှိတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲလိုမျိုး ဗရုတ်သုတ်ခကျတဲ့ ကောင်လေးတွေအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဆရာဇ၀နရဲ့ "ဆိုးပေ" ကိုတော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ('ဆိုးပေ' ကလည်း ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပါ။ ဘယ်ဝတ္ထုကို ပြန်သလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အရင်က မှတ်ထားတာ ပြန်ရှာမရတော့လို့ပါ။) Mark Twain ကတော့ ဒီဝတ္ထုကို ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 'ဆိုးပေ'ကို အရွယ်မရွေးဖတ်ပြီး သဘောကျကြသလို Tom Sawyer ကိုလည်း နှစ်ချိုက်ကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း နှစ်ချိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုတွေ စိတ်ဝင်စားရင် Penguin Classics series တွေကို ရှာဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးပေါပါတယ်။ S$3 or S$4လောက်ပဲရှိပါတယ်။ စလုံးမှာ စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းလိုမှာ ရှိပါတယ်။ ဈေးတက်သွားရင်တော့ သိဝူးပေါ့ဗျာ။ Oxford နဲ့ longman ကတော့ ဈေးနဲနဲပိုများပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Oxford ကထုတ်တဲ့ classic series တွေပါ။ ရှင်းလင်းချက်တွေ သိပ်ပြီးစုံပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ Jack London ရဲ့ The Sea Wolf ကို S$ 18.50 ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တန်တယ်ထင်တာပဲ။ :P
Adventures of Tom Sawyer (Content)
Adventures of Tom Sawyer 1
Adventures of Tom Sawyer 2
Adventures of Tom Sawyer 3
Adventures of Tom Sawyer 4
Adventures of Tom Sawyer 5
Adventures of Tom Sawyer 6
Adventures of Tom Sawyer 7
Adventures of Tom Sawyer 8
Ebooks | comments (3)
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့မှာ Ebook link ကလေးတစ်ခုထားပြီး Classic Literature ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်လေးတွေ ဝေမျှပေးလာတာ အခုနောက်ပိုင်း ဆက်မတင်ဖြစ်ဖူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်သူမှလဲ သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြဘူး ထင်လို့ပါ။
အစကတော့ မြန်မာစာအုပ်ကလေးတွေ ရှိသမျှ ဝေမျှပေးဖို့ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာက မြန်မာစာအုပ်က ရှားတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါ အင်တာနက်ကို ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်မကလိတက်ခင်ကပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ လျှောက်သဝေထိုးရင်းနဲ့ 'နေ့သစ်'တို့လို မြန်မာစာအုပ်တွေ အများကြီး တင်ထားပေးတဲ့ ဆိုက်တွေတွေ့တော့မှ ရေငတ်တုံး ရေတွင်းထဲကျသလို ၀မ်းသာအားရ ဒေါင်းတော့တာပါပဲ။ အင်း.. ကိုယ့်ထက်အများကြီးပိုပြီး စုံစုံလင်လင် တင်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရတော့ မြန်မာစာအုပ်တွေကို ကိုယ်ဝေမျှစရာတောင် မလိုတော့ဘူးလေ။ သူတို့ဆီမှာက အကြောင်းအရာစုံ စာရေးဆရာစုံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ထားပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရမ်းလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာစာအုပ်တွေကို ဆက်မတင်ဖြစ်တော့ပဲ 'မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်'မှာ Classic Literature ဆိုတဲ့ topic လေးဖွင့်ပြီး ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ အနောက်တိုင်း ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုတွေကို တင်ပေးပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ တစ်ချိန်တည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့လေးမှာလဲ Ebook link ကလေးထားပြီး တစ်ပြိုင်တည်း တင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြဘူးထင်လို့ ဆက်မတင်ဖြစ်တော့ပါ။ နောက်တစ်ချက်ကလည်း စာအုပ်တွေမတင်ခင်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှ ဖတ်ညွှန်းသဘောလေး ရေးပြီးမှ တင်ပေးတာဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း ၀တ္ထုရှည်တွေကို အချိန်ပေးမဖတ်နိုင်တော့တာကလည်း တစ်ကြောင်းမို့ ဆက်မတင်ဖြစ်တော့တာပါ။
ဒါပေမယ့် ဟိုတစ်လောက ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ ဘလော့မှာ ကျွန်တော့ရဲ့ Ebook link လေးကို ဖေါ်ပြပေးထားတာကို ကျွန်တော့ဆီလာတဲ့ link တွေကိုစစ်ရင်းနဲ့တွေ့တော့မှ ငါတာဝန် မကျေဖြစ်နေပါလားလို့ ခံစားမိပါတယ်။ အခုလို ဖေါ်ပြပေးထားတဲ့ ကိုညီလင်းဆက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ရှိသမျှ စာအုပ်ကလေးတွေကို ဆက်လက်ပြီး ဝေမျှပေးပါမယ်။ ဖတ်ပြီးသားရော မဖတ်ရသေးတာရော ဖတ်လက်စရောပေါ့။ မြန်မာစာအုပ်တော့ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာစာအုပ်က 'နေ့သစ်'မှာ အတော်များများကို ရှိပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ သွားပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုဆက်ပြီး အနောက်တိုင်း ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုတွေကို Classic Literature ခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲ ဆက်ပြီး ဝေမျှသွားပါမယ်။ နောက် အလျဉ်းသင့်ရင်လည်း အခုခေတ်ပြိုင်စာရေးဆရာတွေရဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း တင်သွားပေးပါ့မယ်။ အဲဒါတွေကတော့ non-fiction တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် အခုနောက်ပိုင်းစာရေးဆရာတွေရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို မဖတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ non-fiction တွေပဲ အဖတ်များလို့ပါ။ (အရင်က ဆရာကြီးတွေစာကို ဖတ်ရသလို အရသာမရှိဘူး ထင်မိလို့ပါ။ အမှန်တော့ အစွဲအလန်းပါ။ သိသိကြီးနဲ့ ပြင်မရတာကတော့ တက်နိုင်ဘူးဗျာ။ မဖတ်ရသေးတာချင်းအတူတူ အသစ်နဲ့ အဟောင်း ဘယ်ဟာဖတ်မလဲဆိုရင် နာမည်တွေကို ရင်းနှီးနေပြီး ဖတ်ချင်ခဲ့တဲ့၊ မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့ ဂန္ထ၀င်ဝတ္ထုတွေကိုပဲ ရွေးဖတ်မိမှာပါ။ တစ်ခါတစ်ခါ တွေးမိပါတယ်။ ငယ်ငယ်က ဖတ်ချင်ခဲ့တဲ့ အဟောင်းတွေကိုသာ ကုန်အောင်လိုက်ဖတ်နေရရင် အသစ်ကို ဖတ်မိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့.. ဖတ်စရာတွေကလည်း ကုန်ကို မကုန်နိုင်ဘူးဗျာ..)
အဲ.. တင်ပေးမယ်ဆိုတာတောင် ဒီနေ့တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်စာအုပ်တွေကို mediafire ကို upload တင်နေတုံးပါ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ connection ကလည်း တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေ မဟုတ်လား။ မနက်ဖြန်မှာတော့ အတော်များများ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေကြမယ့် အမေရိကန်စာရေးဆရာကြီး Mark Twain ရဲ့ "ADVENTURES OF TOM SAWYER" ကို တင်ပေးပါ့မယ်။
မေ့လို့.. 'နေ့သစ်' elibrary ကို ဒီက နေသွားပါခင်ဗျာ။
Ebooks | comments (2)
မသဲမကွဲနဲ့ ခေါ်သံလိုလို နားထဲမှာ ကြားနေတယ်။ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ဖို့ အားယူနေတုံးပဲ လက်ကိုလာကိုင် လှုပ်နိုးတာကြောင့် လေးလံတဲ့ မျက်ခွံတွေကို အနိုင်နိုင်ဖွင့်ရင်း ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဟင်.. ချာတိတ်လေး တစ်ယောက်ပါလား။ ဘာလို့ငါ့ကို လာနိုးတာတုံးဟ..။
အခုတစ်လော စိတ်မပါတာကြောင့် ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း သိပ်မပျော်တာကြောင့် ဘယ်မှလည်း မလည်ဖြစ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ခင်း ပျင်းပျင်းနဲ့ အိပ်ရှေ့ခြံထဲဆင်းပြီး ပက်လက်ကုလားထိုင်တစ်လုံး ဆွဲယူထိုင်ပြီး စာဖတ်လိုက်တာ မျက်စေ့ညောင်းလာပြီး ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်သွားလိုက်တယ် မသိပါဘူး။ အဲဒါ ခုနက ချာတိတ်လေး လာနိုးမှ နိုးလာတာပေါ့။
"အင်.. မင်းက ဘယ်သူလဲဟ..၊ ဘာလို့ ငါ့လာနိုးတာလဲ.."
အံမာ ကိုယ်တော်လေးက မေးခွန်းပြန်ထုတ်နေသေးတယ်။
"အေးလေ မသိလို့မေးတာပေါ့။ နေပါဦး မင်းက ခြံထဲ ဘယ်လိုဝင်လာတာလဲ.. အမှိုက်လိုက်ကောက်တာလား.."
နေပါဦး ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးမယ်။ အမယ် အမှိုက်ကောက်တဲ့ ကလေးနဲ့တော့ မတူပါဘူး။ ရုပ်ကလေးက သနားကမားလေးပါ။ အသက်ကိုတော့ မှန်းလို့မရဘူး..။ ငါးနှစ်.. ခြောက်နှစ်.. လေးနှစ်.. သုံးနှစ်.. ဟာ.. မှန်းလို့မရဘူး။ ထားလိုက်ပါတော့။
"ဟာဂျာ.. အမှိုက်ကောက်တဲ့ရုပ်လားဂျ..၊ အနော့်ကို သေသေချာချာကြည့်ပါဆို.."
ရော.. ခက်တော့နေပါပကောလား။ ခြံထဲလဲ ကျူးကျူးကျော်ကျော်ဝင်လာသေး၊ သူများ ဆက်ရက်မင်းစည်းစိမ်နဲ့ နှပ်နေတာကိုလည်း လာနှောက်ယှက်သေး၊ အခုလည်း သူ့ကို သေချာကြည့်ရမတဲ့။ အော်.. ဒုက္ခ ဒုက္ခ.. အလုပ်ပိတ်ရက်လေး နေ့လည်နေ့ခင်း အိပ်တာတောင် ကောင်းကောင်းမအိပ်ရပါလား။
နဲနဲကျွဲမြီးတိုသွားပေမယ့် ကလေးဆိုတော့လည်း စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါတယ်လေ။ မှန်းစမ်း ကိုယ်တော်လေးကို ရှုစားလိုက်စမ်းမယ်။ အကြွေးရှင်ရဲ့ကလေးတော့ မဟုတ်တန်ကောင်းပါရဲ့။ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ခေါင်းဆုံးခြေဆုံး ကြည့်ပါသော်လည်း အာရုံထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါ အဖြေကတော့ ပေါ်မလာပါ။
"ကဲ.. ကိုယ်တော်လေး၊ မင်းကို ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် စိုင်းစိုင်းနဲ့လည်း မတူဘူး၊ ရိန်းနဲ့လည်း မတူဘူး။ ကဲ.. ပြော ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ ပိုက်ဆံတောင်းမလို့လား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကန်တော့ဆွမ်းပဲ။ ငါတောင် လမ်းထိပ်ထွက် လက်ဘက်ရည်သောက်စရာ မရှိလို့ ဒီမှာလာအိပ်နေတာ။ မင်းအမေက အကြွေးတောင်းခိုင်းလိုက်တာဆိုရင်တော့ ငါမရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်။ မုန့်ဖိုးပေးမယ်နော်။ ဟုတ်ပြီလား"
"ဟာဂျာ.. အဖေရာ.. အဲလောက်ရက်စက်ရလား။ အနော့်ကိုတောင် မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့။ အီးဟီး... ၀ါး..."
ဟိုက် ဟိုက် ရှလပတ်ရည်.. အဲ ဂုရုကွေးရဲ့ စကားတွေလဲ ယောင်ထွက်ကုန်ပါပြီ။ ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်တွေလဲ မိုးကြိုးပစ်ကေ ဖြစ်သွားသလားမသိ၊ အိပ်ချင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေလဲ ဇီးကွက်မျက်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီ။ လောကပါလ နတ်မင်းတွေကယ်တော်မူပါ။ အိုးစွပ်ခွက်စွပ်လည်း မစားမိရပါပဲနဲ့ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ ကလေက၀လေးတစ်ယောက် အဖေလာခေါ်နေလို့ပါခင်ဗျ။
"ဟေ.. ဟေ့ ဟေ့ကောင်.. ဘာပြောတယ် ဘာပြောတယ်။ မင်းလူမှားနေပြီ။ ငါ ရေမရောတဲ့ လူပျိုစစ်စစ် အကောင်းစားလေးကွ။ စော်စော်ကားကားနဲ့ပါလား။ တောက်.. ဟင်း.. အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲလိုက်ရမလား.."
အဲ.. ကလေးဆိုတော့လဲ အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရမှာ မဟုတ်။ အခုမှ ခက်ပြီ။
"ဟုတ်တယ်ဗျ.. ဟုတ်တယ်.. အနော်က အဖေ့သားဗျ.. အဖေရဲ့.. အနော့်ကို ပစ်ထားပြီး မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့.. အီးဟီး.. ၀ါး..."
အောင်မယ်လေးဗျ.. ၃၇ မင်းနတ်တွေ၊ ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေ ကယ်တော်မူပါ..။ သူတော်ကောင်း အကောင်းစားလေးကို ပစ်မထားကြပါနဲ့။ ဒီမှာ မဟားဒယား အဖေလာတော်နေလို့ပါခင်ဗျ...။
"ဟေ့ ဟေ့ကောင် မင်း အာဗြဲကြီးနဲ့ အော်မငိုနဲ့လေ.. ဒုက္ခပါပဲ။ ဘေးအိမ်တွေကြားရင်တော့ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ သိက္ခာတွေတော့ ကျကုန်တော့မှာပါပဲ"
ဘုရားသိကြားမလို့ ငါချိန်နေတဲ့ကောင်မလေးအိမ်က မကြားပါစေနဲ့...။ ဒီကိုယ်တော်လေးကို အမြန်ဆုံး ဘယ်လိုပ,ထုတ်ရပါ့.. စဉ်းစားစမ်း စဉ်းစားစမ်း..။
"ဟေ့ကောင်.. မင်း ငါ့ခြံထဲခိုးဝင်လာပြီး တစ်ခုခုခိုးမလို့ မဟုတ်လား။ ရပ်ကွက်လူကြီးခေါ်ပြီး အပ်လိုက်ရမလား။ တစ်ခါထည်း ကြံ့ဖွံ့ထဲရောက်သွားမယ်။ ဘာမှတ်နေလဲ။ သွားတော့ သွားတော့ မင်းကို မုန့်ဖိုး ပေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား"
"ယူဘူးဗျာ.. ယူဘူး..။ အဖေ မွေးတုံးကမွေးထားပြီး အခုမှ ပစ်ထားတာ..။ အ၀တ်အစားလေးတောင် အသစ်မ၀ယ်ပေးဘူး။ အခုကြည့် အနော့်အင်္ကျီဟောင်းနေပြီဗျ.. ၀ါး.. အင်္ကျီအသစ်ဝယ်ပေး.. အသစ်ဝယ်ပေး.."
ရော.. ခက်ပြီ။ ပြောလေကဲလေ မန်းလေပြဲလေပါလား။ အာပြဲကြီးနဲ့အော်ငိုပြန်ပြီ။
"ဟေ့ကောင် ဟေ့ကောင်.. ရာရာစစ အင်္ကျီတောင်ဝယ်ပေးရဦးမယ် ဟုတ်လား။ မင်းအဖေများမှတ်နေလားကွ.. ဟင်.."
အဲ... မှတ်နေလို့ အဖေလာတော်နေတာပေါ့။ အောင်မယ်လေး ဒုက္ခနဲ့ လှလှနဲ့တော့ တွေ့ပါရော့လား။ အမေရေ.. ကယ်တော်မူပါဦးဗျ..။
"မှတ်တယ်ဗျ မှတ်တယ်။ အနော် အဖေ့သား ပန်းစကားလေဗျာ.. အဖေကိုယ်တိုင် နာမည်လှလှလေး ပေးထားပြီး အခုတော့ ပစ်ထားတယ်ပေါ့။ အီးဟီး... ၀ါး..."
ဟိုက်.. 'ပန်းစကား' ဒီနာမည် ကြားဖူးသလိုပဲ။ ပန်းစကား.. ပန်းစကား.. ကျွန်တော် ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ရေရွတ်နေတုံးပဲ ချာတိတ်ကလေးက စိတ်တိုလာပုံနဲ့ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်ခုန်တက်ပြီး ကျွန်တော့ရင်ဘတ်ကို လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တာ..
ဘုတ်.. ကနဲ အသံကြားလိုက်ပြီး ရင်ဘတ်က အင့်.. ကနဲအောင့်သွားလို့ လန့်နိုးသွားတော့မှ အော် သရက်ပင်အောက် ပက်လက်အိပ်ပျော်သွားတာ ရင်ဘက်ပေါ် သစ်ကိုင်းခြောက်ပြုတ်ကျတာကိုး...။ အင်.. ဒါနဲ့ ခုနက ချာတိတ်လေးရော.. ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။ အင်.. အဲဒါက အိပ်မက်ပဲ။ အင်း အင်း ဟုတ်ပေသားပဲကိုး။ ကျွန်တော်လဲ ဘလော့လေးကို စိတ်လိုလက်ရကို ပစ်ထားလိုက်တာ။ ညီမလေးမက်မက်ပြောတဲ့ ဘလော့တွင်းစောင့်နတ်ကလေးက လာသတိပေးတာဖြစ်မယ်။ တစ်ခုခုတော့ ရေးတင်ဦးမှပါပဲလေ ဆိုပြီး ရေးဖို့စဉ်းစားလိုက်တာ။ ရေးစရာမရှိသေးဘူးဗျာ.. နောက်နေ့များမှပဲ ပို့စ်အသစ်တင်တော့မယ်နော်..။ :P
Personal | comments (6)
Pannzagar © Design by Template Lite